Kenya Oo Kordhisay Qarashka Qareenadda Ka Difaacaya Dacwadda Xuduud-Baddeedka Somalia – Puntlandtimes
Qareenadda ay Dowladda Kenya u kireysatay dacwadda Xuduud-baddeedka Somalia iyo Kenya ayaa la sheegay inay macaash ballaaran ka helayaan arrintaasi.
Shabakadda Wararka ee ka faalloota Arrimaha Ganacsiga ee Businessdailyafrica.com ayaa qortay inay Wasaaradda Maaliyadda Kenya siisay Kooxda Qareenadda lacag dhan 300 million oo Shillinka dalkaasi, si ay u daardar-geliyaan Difaaca dhanka sharciga ee Dacwadda muranka Xuduud-baddeedka oo haatan hor taalla Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ee ICJ oo ku taalla magaalladda The Hauge ee dalka Holland.
Miisaaniyadda Kenya ee Hawlaha Sharciga ee sannadkan waxay ku kordhin doontaa 2 Billion oo Shillinka dalkaasi, si loogu adeegsado Difaaca Kiiska Xuduud-baddeedka ee Somalia iyo Kenya.
Barlamaanka dalka Kenya waxaa isbuucii hore loo gudbiyey dib-u-eegis miisaaniyadda Difaaca Dacwadaasi oo sare loogu qaaday 300.9 million oo Shillinka dalkaasi.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi waxa uu isagana maanta qoray in Xafiiska Xeer-ilaalinta Kenya uu helay lacao dheeraad ah oo dhan 300 million oo Shillinka dalkaasi, si loogu kharaj gareeyo Kooxda Qareenadda ee difaacaysa Danaha Kenya ee muranka xuduud-baddeedkaasi.
Maxkamadda ICJ ayaa la filayaa inay bisha September dib u bilowdo dhegeysiga Dacwadaasi, oo ay DFS horey gudbisay sannadkii 2014-kii, kadib, markii ay fashilmeen wada-xaajoodyo Isfaham looga gaari lahaa xuduud-baddeedka la isku haysto oo ku fadhiya masaafo dhan 100,000 oo KM oo isku wareeg ah.
Somalia waxay doonaysaa in xuduud-baddeedka la calaamadeeyo, iyado ola waafijinayo xuduudka berriga ee ay labada waddan wadaagaan, balse Kenya waxay doonaysaa in xuduud-baddeedka lagu calaamadeeyo sohdimihii ay Xooggagii Gumeystayaasha sameeyeen.
Haddii ay Maxkamadda ICJ u xukmiso Somalia waxay Kenya ku hungoobi doontaa damaceeda ku aadanaa inay la wareegto Milkiyadda Xuduud-baddeedka Somalia ee Badweynta Hindiya.
Muranka xuduud-baddeedkaasi waxa uu Khilaaf Diplomaasi ka ka dhex dhaliyey labada Waddan, iyadoo Dowladda Kenya horey u sheegtay inay Somalia u aqoonsan yihiin dal caddow ku ah Kenya.
Bishii Feberaayo ee sannadkan, Dowladda Kenya waxay u yeertay Safiirkii ka joogay Somalia, kuna amartay Safiirkii Somalia inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo.
Tallaabadaasi ayaa timid, kadib, markii ay Dowladda Kenya sheegtay inay Somalia xaraashayso xirmooyin ay ku jiraan Shidaal iyo Gaaska Dabiiciga oo ay Kenya leedahay, balse, waxay ku hungoowday sheegashadaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Kenya waxay galangal kasta ugu jirtaa si ay Somalia u saarto cadaadis dhan kasta, waxayna maalmo hore joojisay Duullimaadyadii Diyaaradaha ee sida tooska ah uga kala gooshi jirtay Garoomadda Diyaaradaha ee ku kala yaalla Labada Caasimadood ee Muqdisho iyo Nairobi.
Turjumadi Radio Dalsan